Egwuregwu ero: nhazi na ojiji, ihe ize ndụ - Mushrooms - 2019
Ngwurugwu oku: nkọwa, ngwa bara uru. Kedu ihe ize ndụ nke ero ahụ
N'ịbụ ndị na-achọta achịcha na-ebuzi na tebụl, mmadụ ole na ole ga-enwe obi ụtọ. Nye ọtụtụ ndị mmadụ, nke a bụ ihe na-adịghị mma, ma ọ bụ ihe omuma. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ebu ọcha ahụ, ma ọ bụ ihe mkpo ero, anaghị adị mfe dị ka o yiri ka ọ na-ele ya anya. Taa n'ụwa a, e nwere ihe dị ka ụdị 60 nke omenala a. Ụfọdụ n'ime ha amụtala itinye n'ọrụ ha, ma e nwekwara ndị dị ize ndụ na ahụ ike. Ònye bụ onye ọka a dị egwu - enyi ma ọ bụ onye iro, gbalịa chọpụta ya.
Aka - Egwu nke ụdị nke ebu, na-adabere na nri, ala, ihe gbasara mkpụrụ osisi sitere na mmebi nke ọnọdụ nchekwa ha. Na nhazi mbụ, ọ dị ka fuzz whitish, ya mere ya aha nke abụọ bụ ntụ ọcha.
Ị ma? Ke 1922 ke Egypt, ke akpa ini, ẹma ẹkụt mfụhọ Pharaoh emi mîdịgheke - emi ẹbụk Tutankhamun. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ọkachamara n'ihe banyere ihe ndị na-arụ ọrụ na saịtị ahụ nwụrụ n'ime obere oge mgbe nchọpụta ahụ gasịrị. Ihe ndị a na-adịghị mma mere ka e nwee ntamu nke ọbụbụ ọnụ nke meriri ndị omekome ahụ. Otú ọ dị, n'afọ 1999, ndị ọkà mmụta ihe ọmụmụ German na-achọpụta ọnwụ ọnwụ: a na-ekpuchi ọkpụkpụ dị n'ili ahụ site na ụdị akpụ pụrụ iche, bụ nke, ozugbo n'ime ahụ mmadụ site na nsụgharị akụkụ ahụ, kpataara mmadụ ngwa ngwa.
Ka colony na-etolite, nhazi nke ala amalite ịmalite mụta nro ahụ. Ha na-enye chara grayish ma ọ bụ agba aja aja, ma site na oge oke ogo kpam kpam.
N'okpuru microscope, ebe obibi mucor dị nnọọ mma. Ndabere nke ya - mycelium, nke bu nnukwu branched cell nke nwere otutu uzo.
Site n'enyemaka nke eri ọcha (hyphae) a na-etinye ahụ a n'ala. Dị ka ezigbo mgbọrọgwụ, alaka ndị a, na-eru nso n'akụkụ nke mycelium. Ihe a na-ahụ anya n'anya anya bụ sporangiophores, ntutu isi na-eto site na isi mycelium.
Ọ bụrụ na nje ahụ nọ n'ọnọdụ dị jụụ, ntutu isi a ga-eru ọtụtụ centimeters n'ịdị elu. Na usoro maturation nke mucor na sporangiophores na - egosi igbe - igbe nwere spores maka mmeputakwa.
Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị mara onwe gị na ndepụta nke mushrooms oriri na nsi, na-amụkwa otú e si lelee mushrooms maka oriri na-ewu ewu site na-ewu ewu ụzọ.
Ọ bụrụ na n'oge a nke mmepe ị na-ele ero n'okpuru obere microscope, mgbe ahụ, ọdịdị ya ga-adị ka ohiri isi, nke nwere atụdo. Ya mere, a na-akpọkarị ero a dị ka ọkpụkpụ.
N'ọgwụgwụ ikpeazụ nke mmụba nke mkpịsị anụ ahụ na-agbaji, ọtụtụ puku mfri mfri, dị njikere inye ndụ na ọgbọ ndị ọzọ nke agbụrụ dị iche iche, na-agbasasị n'akụkụ niile. N'ihi na ha nwere nrịanrịa, enwere ike ịhụ ha n'egwuregwu pụrụ iche.
Utu abughi uzo abuo:
eji esemokwu. N'ihi na ha na-akọ ihe, ọ chọrọ ezigbo nri, ọkụ, ohere mmiri na ikuku ọhụrụ. A na-agbasa esemokwu n'etiti ikuku;
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na esemokwu adịghị enwe obi ụtọ iji banye n'ọnọdụ ndụ, ọ ga-adị ogologo oge, ha nwere ike ịnọ na-ehi ụra, ka ha na-ejide ha. Mgbe ọnọdụ ahụ na-atọkwu ụtọ karị, ha na-eto ngwa ngwa, na-emepụta mycelium ọhụrụ.
mmekọahụ. Ọ bụrụ na ala nke obodo ndị ahụ na-eto eto agaghịzi enwe ike ịzụ ha, mgbe ahụ hyphae nke dị iche iche mycelium na-amalite ịgbanwe, jikọta isi ha, gametangia. N'ihi ngwakọta a, a na-etolite zygote kpuchiri elu. Mgbe emesiri, ọkpụkpụ ya na-agbaji, na-atọhapụ mycelium germinal, bụ nke a na-ebute site na nkwarụ maka mmepụta mmekọahụ. Nanị otu njikọ ha na-eduga na okike nke anụ ahụ dị egwu.
Na ụwa ọ dịghị ebe ọ bụla ntụzi ahụ biri. A na - achọta ya na mgbidi nke ndị na - arụ ọrụ na mberede, na satellites, na nri, ala na ihe mkpofu. Ebe ọ bụla ọ na-ekpo ọkụ, na-ekpo ọkụ na e nwere ihe ị ga-eri, a ga-enwe ero nsị. Na nri ya dị iche iche, nke dị elu kalori.
Ị ma? Ọ bụrụ na ị na-ele ya anya na mbụ, ọkpụkpụ ahụ nwere ike ibibi brik, plasta na ọbụna ihe.
Idebe ndepụta nke ihe ụtọ bụ achịcha ọcha, poteto, na mkpụrụ osisi dị ụtọ. Ngwurugwu na-acha ọcha na-acha ọcha Dịka ụdị nri, a na-akpọ ebu dị ka saprotrophs - ntule ndị na-aṅụ nri sitere na akụkụ ndị nwụrụ anwụ.
Ọ dị mkpa! Ọrịa na-ekwe omume site na nsị nke spores ma ọ bụ ntinye ha site na ọnya na akpụkpọ ahụ n'okpuru ọnọdụ mgbochi nsogbu.
Otu n'ime umu ahihia iri isii di n'umu mmadu, n'ihi na site n'enyemaka ha:
mee cheese. Maka nkwadebe nke tofu na tempeh na-ewu ewu, a na-ewere ihe na-esi na mucor, a na-ejikwa nkume na-acha uhie uhie na-acha anụnụ anụnụ na-adabere na -acha mma "
soseji esi nri. Ụdị ihe dị otú a na-adịkarị n'Ịtali na Spain, ebe e nwere teknụzụ pụrụ iche maka nhazi nke anụ. Dị ka ha si dị, a na-edebe sausaji n'okpuru okpuru ulo otu ọnwa, ebe ha na-acha ọcha ma ọ bụ na-acha akwụkwọ ndụ ọkụ. Mgbe ahụ, a na-arụpụta nhazi pụrụ iche nke ngwaahịa, mgbe ọnwa atọ gasịrị, ha dị njikere maka iji ya eme ihe;
mee ka mmanya na-egbu osisi;
nweta ọgwụ. Site na mucor rammann na-emepụta ụdị ọgwụgwọ pụrụ iche - ramitsin.
Mmiri dabeere na cheese na Mucor
Mana Mukor abụghị naanị uru. Ụfọdụ n'ime ụmụ ya nwere ike imerụ mmadụ ahụ ike. Otu n'ime ọrịa ndị a maara nke ọma bụ ịmịcoromicosis. N'ịbanye n'ime ahụ mmadụ, ero ahụ na-emetụta akụkụ ahụ dị iche iche, na-akpata ọnwụ nke akụkụ ahụ. Ụmụ anụmanụ nwekwara ike ibute ọrịa.
N'ime iri isii na ise, ọ bụ naanị mmadụ ise na-ebute ụmụ mmadụ egwu, ọtụtụ ndị ọzọ dị ize ndụ nye ụmụ anụmanụ.
Ihe oriri kachasị mma oriri bụ: chanterelles, white mushrooms, russules, agarics mmanụ aṅụ, volushki, ryadovki, mokhovik, mmiri ara ehi mushrooms, boletus mushrooms na boletus.
Nkọ, ma ọ bụ na-acha ọcha ọcha, bụ ihe dịka oge ochie nke na-eto ngwa ngwa n'ihu ọnụnọ ọnọdụ. A na-akọ ụfọdụ n'ime ụdị ya na ụlọ akwụkwọ nyocha iji meekwu ihe na nri na ọgwụ. Ma n'ime ụlọ obibi site na "ihe ịchọ mma" dị otú ahụ n'elu mgbidi, ebe ndị dị na ngwaahịa kwesịrị iwepụ ngwa ngwa iji zere nsogbu ahụ ike.
Ihe ọṅụṅụ ọgwụ na-esi ísì ụtọ dị na melissa: ojiji na mmetụta dị n'akụkụ. Uru nke tincture nke lemon ahịhịa
Kedu ihe ụfọdụ mere spathiphyllum nwere ike ịnwụ na otu esi echekwa osisi ahụ?
Otu esi akụ na-eto alfredia (ahịhịa ahihia,
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ngwurugwu oku: nkọwa, ngwa bara uru. Kedu ihe ize ndụ nke ero ahụ